Prometheus In The New Age: “စကြာဝဠာကြီးကို ဘုရားသခင် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းမဟုတ်”ဟု ရူပဗေဒ ပညာရှင်ကြီး ပြောဆို
“စကြာဝဠာကြီးကို ဘုရားသခင် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းမဟုတ်”ဟု ရူပဗေဒ ပညာရှင်ကြီး ပြောဆို
စကြာဝဠာကြီး ကို ဘုရားသခင် ဖန်တီးခဲ့ခြင်း မဟုတ်ဟု ကမ္ဘာကျော် ရူပဗေဒ ပညာရှင်ကြီး စတ်ီဗင် ဟော့ကင်း Stephen Hawking က ပြောယခုလတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် သူ နှင့် အမေရိကန် ရူပဗေဒ ပညာရှင် လီယိုနက် မလိုဒီနော (Leonard Mlodinow) ပူးပေါင်းပြုစုရေးသားသော ‘ခမ်းနားသော ဒီဇိုင်း’ (Grand Design) စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲတွင် ဟောကင်းက ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဆွဲငင်အား (gravity) ကဲ့သို့ နိယာမ ရှိနေခြင်းကြောင့် စကြာဝဠာကြီး အနေနှင့် ဘာမှမလိုဘဲ သူဘာသာသူ တည်ရှိနေနိုင်သည်။ အလိုအလျောက် ဖန်တီးခြင်း (Spontaneous creation) ဆိုသည်မှာ စကြာဝဠာကြီး ဘာကြောင့် တညိရှိနေသလဲ၊ လူသားတွေ ဘာကြောင့် ဖြစ်တည်နေသလဲ မေခွန်းတွေအတွက် ဘာမှမရှိတာထက်စာရင် တခုတခုရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြင်မှု တစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်” ဟု ဟော့ကင်း ကဆိုသည်။
“ဘုရားသခင်အား စကြာဝဠာကြီးကို စတင်ပေးရန် အသနားခံ တောင်းဆိုစရာလည်း လိုမည်မဟုတ်ပါ” ဟု သူကပြောခဲ့သည်။
အသက် ၆၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ရူပဗေဒ ပညာရှင်ကြီး စတင်ဗင်ဟောကင်း သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့သော သူ၏ “အချိန်၏ သမိုင်း” (A Brief History of Time) စာအုပ်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ပညာရှင်များကြား လေးစား အသိအမှတ်ပြု ခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
သူသည် black holes, cosmology and quantum gravity စသော ရူပဗေဒဆိုင်ရာ သီအိုရီ သဘောတရားများအပေါ် လေ့လာစူးစမ်းတင်ပြရဲသော လုပ်ရပ်များကြောင့်လည်း ထင်ရှား ကျော်ကြားသည်။
ဘလော့ခ်ဂါ မိုးဆက် ကဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်တင်ပြပေးပါသည်။
၂၂. စက်တင်ဘာလ. ၂၀၁၀
Posted by အလင်းဆက် at 6:28 AM